Top 5 free MOD Ntụgharị: tọghata ọ bụla MOD faịlụ mfe
> Resource> Free> Top 5 Free MOD Ntụgharị
Ị na na mkpa nke a MOD faịlụ Ntụgharị? Ma eleghị anya, ị na-na a uko ego na unu adịghị bu n'obi okodu ukwuu na a faịlụ akakabarede software. Hapụ, isiokwu a na-ekpughe ise free ngwa na ike ga-eji iji tọghata MOD faịlụ effortlessly. Ị nwere ike iri uru nke ha na nweta gị faịlụ akakabarede mkpa.
Nke a bụ oké MOD akakabarede ngwá ọrụ na-atọghata MOD faịlụ mfe. Ọ bụ oké ọzọ ka na-akwụ ụgwọ software, àjà niile atụmatụ nke ugwo software eme. E wezụga akakabarede, ị nwekwara ike ọkụ gị converted faịlụ ka a CD ma ọ bụ DVD, tọghata video faịlụ ka ihe karịrị otu narị formats ma dezie gị videos mfe na ngwa ngwa. Common mmepụta format site na nke a video Ntụgharị bụ 3D MP4, 3D WMV, 3D AVI, 3D MKV na 3D YouTube video.
Breeki aka (Windows, Mac, Linux os)
Breeki aka bụ otu faịlụ akakabarede ngwá ọrụ na-eji maka na ntughari nke video faịlụ ka fọrọ nke nta ọ bụla usoro, MOD yana idobe okirikiri. Ọ nwere ihe interface na dị mfe iji na nna ya ukwu, n'ihi ya, ọgwụgwụ ọrụ adịghị ihe ọ bụla nsogbu mgbe nile. Nke a bụ software na e mepụtara-agba ọsọ na atọ nile isi ọrụ usoro ke ahịa, na-eme ya a họọrọ ọzọ ka na-akwụ ụgwọ video converters. Ya ntọlite ​​na nwụnye faịlụ na-mere dị ka obere ka o kwere omume, bi obere oghere gị usoro.
Chọrọ weghara ọkacha mmasị gị Youtube videos? Nke a na usoro bụ zuru okè n'ihi na-ewere FLV faịlụ na converting ha ka ha a ọzọ gh AVI usoro. The interface bụ kensinammuo iji eme ka ọ mfe iji rụọ ọrụ si akpa oge ị na-amalite ya elu. Ihe omume ahụ bụ free nke malware nke mgbe ụfọdụ piggybacks na na free downloads.
Nke a bụ ike video Ntụgharị na nwere obosara nso nke faịlụ compatibilities. Ọ e mepụtara na-agba ọsọ na ma Windows na Mac usoro. E wezụga MOD, faịlụ ndị ọzọ formats agụnye MPEG, VOB, PS, M2P, MOD, VRO, DAT, MOV, DV, AVI, MP4 na TS. Nke a ngwa nwere ndị ọzọ functionalities dị ka edezi a faịlụ clip, idetuo mado na ewepụtụ. Ọ ga-eji na-egwu nkiri faịlụ usoro dị MPEG na a kpọrọ ndị ọzọ faịlụ formats. Ọ atọghata, MPEG faịlụ n'etiti muxed na demuxed formats n'ihi nzube nke authoring. Ọ ga-eji encode dị iche iche nkiri formats.
Zamzar (Online Ntụgharị)
Nke a bụ free online faịlụ Ntụgharị na ike ga-eji iji tọghata MOD faịlụ Ọkpụkpọ. The mfe imewe nke a ngwa na-eme ka ya mfe iji. Ọ na-ukwuu na-atụ aro ndị na-mgbe niile chọrọ iji tọghata faịlụ na-enweghị nbudata a software. Were uru nke ngwá ọrụ a taa na ị ga-enwe mmasị site na ya arụmọrụ.
Ị agaghịkwa na-ata ahụhụ mgbaka nke enweghị ike na-egwu MOD faịlụ Ọkpụkpọ n'ihi na ndị a na free ngwa, nke ahụ bụ a ihe gara aga na ndị a ngwá ọrụ oké uzo ozo ka ugwo software.